Wargeysyada Yurub Iyo Wararkii Ugu Danbeeyay Suuqa Kala Iibsiga Ciyaartoyda. - jornalizem
Arsenal ayaa dalabyo dhowr ah oo ku aadan kabtankooda Robin Van Persie ka heshay koox dhowr ah, lakiin dalabyadaas ayaa ka yaraa lacagta ay Arsenal ku dooneyso ee 25 milyan ginni sida ay qortay Daily Mirror.
Liverpool ayaa ogolaatay heshiis 10 milyan ginni ah oo ay kula wareegeyso weeraryahanka kooxda Fulham Clint Dempsey. Sida ay qortay Daily Mail.
Real Madrid ayaa qorsheyneysa inay 20 milyan ginni ku dalbato daafaca kooxda Manchester City Micah Richards. Sida ay qortay Daily Star.
Manchester United ayaa laga soo diiday dalab 29.8 milyan ginni ahaa oo ay ku dalbadeen kubadsameeyaha kooxda Sao Paulo Lucas Moura. Sida ay qortay Daily Mirror.
Tababaraha kooxda Manchester United Sir Alex Ferguson ayaa qirtay inu muhiimadiisa koowaad ay tahay inuu la saxiixdo daafac bidix oo cusub. Sida ay qortay Daily Mirror.
Tottenham ayaa diyaar u ah inay kula tartanto kooxda Chelsea saxiixa weeraryahanka Porto Hulk, iyadoo tababaraha Spurs Andre Villas-Boas uu soo dhigay xiisaha uu u hayo ciyaaryahanka. Sida ay qortay Daily Mail.
Arsenal ayaa ku qasbi doonta kabtankooda Robin van Persie inuu dhameysto 12ka bilood ee uga haray qandraaskiisa, waxaana uu xor u noqon doonaa inuu kooxda ka tago ka dib dhamaadka xilli ciyaareedka cusub. Sida ay qortay The Times.
Kooxda Chelsea ayaa laga diiday dalab 27 milyan ginni ah oo ay ku doonayeen weeraryahanka kooxda Shakhtar Donestk Wilian. Sida ay qortay Daily Mail.
Barcelona ayaa ku soo biirtay kooxaha xiiseynaya daafaca kooxda Liverpool Daniel Agger, inkastoo Reds aysan qorsheyneynin inay iska iibiyaan. Sida ay qortay Daily Mail.
Arsenal ayaan weli wadahalo la furin Theo Walcott oo ku aadan saxiixa qandaraas cusub. Sida ay qortay The Guardian.
Ciyaaryahanka khadka dhexe ee Internacional Oscar ayaa tijaabada caafimaadka u mari doona Chelsea inta uu xulkiisa Brazil la joogo ciyaaraha Olimbikada eek a dhacaya London. Sida ay qortay Daily Mail.
Ciyaaryahan Rafael van der Vaart ayaa shaaca ka qaaday inuu doonayo inuu sii joogo kooxda Tottenham, isagoo meesha ka saaray inuu ka tagayo kooxda xagaagan. Sida ay qortay The Sun.
Tababaraha cusub ee Liverpool Brendan Rodgers ayaa u sheegay weeraryahankiisa Andy Carroll inuu ka tagi karo kooxda. Sida ay qortay The Sun.
Kooxda Lokomotiv Moscow ee dalka Russia ayaa kula tartami doonta Tottenham saxiixa Emmanuel Adebayor. Sida ay qortay Daily Telegraph.
Wakiilka Dimitar Berbatov ayaa sheegay in ciyaaryahanka uu wakiilka u yahay laga yaabo inuu ku biiro midkood kooxaha AC Milan ama Juventus. Sida ay qortay talkSPORT.
Weeraryahanka Lyon Bafetimbi Gomis ayaa ku dhow inuu iska diido heshiis laga yaabo inuu ku biiro kooxda Tottenham. Sida ay qortay talkSPORT.
Weeraryahanka West Brom Peter Odemwingie ayaa laga yaabaa inuu kooxda ka tago ka dib markii ay garoonka tababarka iskula dhaceen tababare Steve Clarke.Sida ay qortay talkSPORT.
Ka dib markii la xaqiijiyay in maanta uu Zlatan Ibrahimovic si rasmi ah ugu biirayo PSG, waxaa xagaagan AC Milan ka tagay 12 ciyaaryahan oo qaarkood uu ka dhacay qandaraaska halka qaarka kale la iska iibiyay. Sida ay qortay Gazzetta dello Sport.
Agaasimaha kooxda Juventus Morata ayaa qirtay in kooxdiisa ay xiiseyneyso weeraryahanka kooxda Fiorentina Stevan Jovetic. Sida ay qortay Gazzetta dello Sport.
Antonio Cassano ayaa lagu soo waramayaa inuu doonayo inuu ka tago kooxda AC Milan, isagoo ka carooday iibintii ay kooxda iska iibisay Zlatan Ibrahimovic iyo Thiago Silva, waxaana uu doonayaa inuu ku laabto Sampdoria. Sida ay qortay Corriere dello Sport.
Inter Milan ayaa ku qalqaalineysa kooxda Real Madrid inay aqbalaan heshiis ah inay isdhaafsadaan ciyaarayahanda Maicon iyo ciyaaryahanka khadka dhexe ee Los Blancos Nuri Sahin. Sida ay qortay Corriere dello Sport.
Kooxda Genoa ayaa u soo bandhigtay Inter ciyaaryahan Alberto Gilardino, iyagoo raadinaya ciyaaryahan u fadhiyo Milito, madaama Pazinni uu ku dhawaaqay inuu kooxda ka tagayo. Sida ay qortay goal.com